Ragga cusub ee baaskiiladaha korantada leh | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto baaskiilka buurta Mens cusub baaskiilada cusub ee korantada A6AB26
Mooto: 36V 250W / 350W / 500W Hub Moto
Bandhiga: LCD Screen
Biriigga: Saxannada hore & gadaal
Tareenka: Dibedda 26 * 1.95 / 27.5 * 1.95 / 29 * 2.1 inji
Xarafka: koorta buurta
Maxadka: 40-60km halkii lacag ah
Xaashiyaha ： Hotebike (awood OEM)
Ragga buuraha cusub ee baaskiilka korantada leh ee casriga ah
Si loo wanaajiyo dad badan oo waxtar u leh nolosha, tan Baaskiilada caadiga ah ee korantada oo leh 250w-500w matoor aan cillad lahayn, 21 xawaare iyo batrool caag ah 36v. Haddii buur, magaalo, geel iyo wixii kaleba, dhammaantood waa ay buuxin karaan baahiyahaaga.
Suunka fiyuuska leh ee lafdhabarta ah 36V10AH, sanduuqa batari waa la kala saari karaa si aad uga qaadato baaskiilka ama si gooni ah qolkaaga.
PAS Riding System, 5 xawaaraha lagu hagaajin karo, 1: 1 caawinta pedal, oo ay gacanta ku hayaan bandhigyo badan oo LCD ah. Badbaadi korantada iyo kordhinta nolosha batroolka. Waxaad raaci kartaa habka pedala laakiin sidoo kale waxaad xakameyn kartaa suulka. Waxaad ku dhici doontaa jacaylka baaskiilada korontada.
Qalabka fareebka hore iyo kan danbe ee 160, waxaad ka badbadin kartaa xaalad deg-deg ah oo leh masaafada nasashada ee 3. Isku habee kabaalka fareebka kaas oo ah koronto goynta markaad braking qaadato. Badbaadinta baaskiilada ayaa si weyn loo hagaajiyay.
Mashiinka aan burushka lahayn, waxaad siisaa 250W / 350W xawaare sare oo koronto la'aan ah bilaa qalab, xawaaraha ugu badan waa illaa 25-30km / h. Waa mid aad u awood badan. inaadan ka welwelin buuraha ama dabaysha.
Muuqaal sawir leh oo badan oo LCD ah, oo loogu talagalay iyo soo saarey warshadeena, si sahlan oo loo xakamayn karo tayada, waxay muujin kartaa Maalka, Mileage, Heerkulka, Voltage, Code error iyo wax ka badan. Waxaad si sahlan u isticmaali kartaa buuggan.
Baaskiil koronto oo badan: 26 inji baaskiil koronto kuleyl ah, baaskiil koronto oo caan ah, Baaskiilada buuran ee fiilada buuxa, Bafang bartamaha wadista mootada korantada, 48v buurta awooda sare leh ebike
Tags:mens baaskiilada korontada Baaskiilada caadiga ah ee korantada baaskiil cusub oo koronto ah
Ka hor: Magnesium alwaax cirifka baaskiilada korontada ee iibinta A6AB26M
Next: Joojinta laba-lab ah 26 inch baaskiil koronto A6AH26-S